Fiaraha-miasa PLAE IV sy MNP: hovolena hazo manodidina ny valanjavaboahary ao Isalo | NewsMada
Fiaraha-miasa PLAE IV sy MNP: hovolena hazo manodidina ny valanjavaboahary ao Isalo
Namatsy vola ny fandaharanasa iarovana ny fahasimban’ny nofon-tany PLAE (Programme de lutte antiérosive), nanomboka ny taona 1998, tamin’ny alalan’ny KfW ny fiaraha-miasa alemà teto amintsika. Fandaharanasa mivoy ny fomba fiasa vaovao eo amin’ny fiarovana ny fahasimban’ny nofon-tany sy ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary eto Madagasikara ny PLAE. Hatramin’ny taona 2017, manohana ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ny manampahaizana avy amin’ny cabinet de conseil GFA hanitarana ny asan’ny PLAE ho an’ny faritra Sofia, ny faritra Ihorombe, ny faritra Matsiatra Ambony ary ny faritra Amoron’i Mania. Hotanterahina hatramin’ny taona 2021 ny asa nosantarina roa taona lasa. Tanjona napetraka ny famatsiana arina fandrehitra ny tokantrano, ny fiarovana ny faritra misy fambolena amin’ny fahasimban’ny nofon-tany sy ny fahatotoran’ny fasika, eo koa ny fampiakarana ny vola miditra amin’ny vondrona iantefan’ny fandaharanasa ary farany ny fampihenana ny fitrandrahana ny ala voajanahary.
Manohana ny Madagascar National Parks (MNP) mivantana koa ny KfW amin’ny vola kirakirain’ny Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar (FAPBM). Fikambanana malagasy miasa eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy haivoary, ny ranomasina sy ny ala, izy ity ary misahana ny fitantanana valanjavaboahary 43 manerana ny Nosy. Iray amin’ny valanjavaboahary arovana ny ao Isalo (ao amin’ny faritra Ihorombe) izay manana ny mampiavaka azy. Vitsy ny hazo maniry amin’ny tampon’Ihorombe iny ary ao anatin’ny vala ihany no ahitana hazo maniry.
Nametraka fiaraha-miasa nosoniavina, ny volana oktobra 2018, ny PLAE IV sy ny MNP manome alalana ny mpitantana ny valanjavaboahary hamboly hazo amin’ny velarana 100 ha ao amin’ny kaominina Ranohira manodidina ny valanjavaboary. Azo trandrahina ho angovo ampiasain’ny mponina amin’ny filana andavanandro ny hazo voavoly. Tanjona ny hampihena ny fikapana ny hazo ao anatin’ny valanjavaboary manimba ny tontolo iainana. « Fisantarana ny fiaraha-miasa ihany izao ary hitohy amin’ny sehatra hafa », hoy ny fanazavan’ny tomponandraikitra.